« Mahery ny Finoana omban’ny Fanantenana sy Fitiavana …». - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Alahady Paka B 02
Asa. 4, 32-35 ; 1 Jo. 5, 1-6 ; Jo. 20, 19-31
Tantarain’ny Evanjely amin’izao alahady faharoa fankalazana ny Paka izao ny fihetsik’i Jesoa mankahery sy manamafy ny finoan’ireo mpianany, fa indrindra ny finoan’i Tomà, vaohozongozona tamin’ny fiatrehana ny fijaliana sy ny fahafatesan’ny Tompo, fa indrindra tamin’ny namantsihana Azy teo ambony hazofijaliana. Ankalazaina amin’ity alahady ity ihany koa ny Famindram-pon’Andriamanitra izay aseho amin’ny sarin’i Jesoa misy ny Tanany sy ny fony manapariaka ny hazavan’ny famindram-pon’Andriamanitra.
« Ho aminareo anie ny fiadanana ». Izany no teny voalohany nolazain’i Jesoa rehefa niseho tamin’ny mpianany tafavory Izy. Fiadanana setrin’ny sahotaka sy ny korontana nandritra ny nisamborana sy namantsihana Azy teo ambony Hazofijaliana. Tahotra sy horohoro tokoa mantsy no niainan’ireto mpianatra ireto iny zava-nitranga iny. Nihidy aman-trano izy ireo noho izany tahotra izany. Nihidy aman-trano izy ireo noho ny henatr’olona amin’ity mpampianatra azy ireo nohelohina ho faty tamin’ny hazofijaliana. Nihozongozona ny finnoana, very ny fanantenana, ritra ny fitiavana. Nijoro teo afovoan’izy ireo kosa i Jesoa na dia nihidy aza ny trano. Tsy misy mahasakana Azy intsony, na rindrina na vararavarana mikatona, satria efa resiny hatramin’ny fahafatesana aza. Ny fihetsiny rehetra; ny fitsanganany teo anivon’izy ireo, ny fanehoany ny Tanany sy ny Fony no namelombelona indray ny hery sy ny hafalian’ireo mpianatra. Eny, ho aminay tokoa anie ny fiadananao ry Jesoa tafatsangan-ko velona, indrindra amin’izao savorovorom-piainana atrehinay izao.
« Tahaka ny nanirahan’ny Raiko Ahy no anirahako anareo koa ». Tsy hafaliana sy fiadanana ho enti-misonenika an-toerana fotsiny no nomen’i Jesoa ny mpianany fa fiadanana miampy fanirahana ihany koa. Nampombany fahefana lehibe izany iraka izany dia ny fahefana hamela na hitazona ny fahotana… Ny tsiokan’ny Fanahy Masina, natolotr’i Jesoa tafatsangan-ko velona, no hery manosika izany iraka izany mba hanapariaka ny famindram-pon’Andriamanitra mamela fahotana. Indro àry ilay Tanana maratra sy Fo mijaly manapariaka hazavana manambara ilay famindram-pon’Andriamanitra Ray. Izany famindram-pon’Andriamanitra Ray izany no asain’i Jesoa torin’ireto mpianany manomboka izao. Eny, hiantefa aminay tokoa anie ny tara-pahazavan’ny famindram-pon’Andriamanitra Ray izay apariakanao amin’ireo ferinao.
« Raha tsy hitako ao amin’ny tanany ny loaky ny fantsika…ary atehiko amin’ny tratrany ny tanako dia tsy hino aho ». Izany no fianianan’ i Tomà. Tsy teo izy tamin’i Jesoa tafatsangan-ko velona, niseho voalohany tamin’ny mpianany, naneho ny Tanany voafantsika sy ny tratrany voalefona. Nanamarika lalina an’i Tomà anefa ny mandinika ny fomba namantsihana ilay Tompony. Ren’ny vatany sy nihatra tamin’ny fony ny nahita ny tanan’i Jesoa voafantsika sy ny lanivony voalefona, hany ka toa tsy nampino azy ny filazan’ireo namany fa velona indray ny Tompo ary nampiseho ny Tanany sy ny Fony tamin’izy ireo. Eny, mba ho tsapanay amin’ny tananay sy hiantefa ao am-ponay ihany koa anie ry Jesoa ny ferinao.
« Nino ianao, ry Tomà, satria nahita Ahy ; sambatra izay tsy nahita ka nino ». Notanterahin’i Jesoa ny fanirian’i Tomà. Nikasika ny ferin’i Jesoa izy ka niaiky fa io tokoa ny Tompo sy Andriamaniny. Tsy hadinon’i Jesoa ihany koa ireo rehetra izay mino Azy na dia tsy nahita Azy aza. Tsy takona Izy fa eo lalandava. Eo anivon’izao fiainana izao, eo amin’ny Fiangonany, indrindra fa ny Fiangonany izay mbola misy fery noho ireo toetra tsy mendrika asehon’ny sasantsasany amin’ny zanaky ny Fiangonana…, noho ny fifanenjehana sy ny fifanaratsiana ataon’ny samy kristianina ka mampisalasala ny hafa finoana hiaiky sy hino fa eo tokoa i Kristy velona. Eny, sambatra izay tsy mahita kanefa mino.
« Tompoko sy Andriamanitro! Jesoa Tompo ô, fantatrao fa malemy izahay ary fatra-pisalasala; koa hazavao sy herezo tahaka an’i Md Tomà, ary ampio hiaiky fa Ianao irery no Tompo sy Andriamanitra. Velomy ao aminay indray ny finoana sy ny fanantenana ary ny fitiavana anao Ilay velona mandrakizay ».
Teny Mahavelona : « Fitiavana sy Fahamarinana no tena endrik’i Kristy » - il y a 6 mois